Buuxinta ugu Fiican WordPress Plugins si loo kordhiyo Iibka Tigidhada | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Buuxinta ugu Fiican WordPress Plugins si loo kordhiyo iibka tigidhada
Buuxinta ugu Fiican WordPress Plugins si loo kordhiyo iibka tigidhada
Ku soo dhawoow "Plugged In," taxane socda oo aan ku eegayno qaar ka mid ah plugins-yada WordPress-ka ugu caansan qaybaha kala duwan. Toddobaadkan, waxaanu eegi doonaa plugins-yada WordPress-ka ugu fiican ee tigidhada lagu goosan karo.
Isticmaalka martiqaadka waraaqaha ee dhacdooyinka waxay noqotay wax la soo dhaafay. In ka badan iyo in ka badan, qorshayaasha dhacdada tigidhada ayaa isticmaalaya aaladaha internetka si ay u maareeyaan dhacdooyinka. Aaladaha maaraynta khadka ayaa u fududeeya ganacsiyada inay si toos ah uga maareeyaan dhacdo iyaga laftooda shabakadooda. Aaladda sii kordheysa ee lagama maarmaanka u ah ayaa ah qalab lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay iibinta tigidhada. Xirmooyinkan ballan-qaadka ah waxay gacan ka geystaan ​​maaraynta dhacdooyinka bogagga WordPress si ay macaamiishu si fudud ugu iibsan karaan tikidhada riwaayadaha soo socda, xafladda, dabbaaldegyada, dhadhaminta khamriga, iwm.
U fududee macaamiishu inay ka jawaabaan dhacdooyinka adiga oo isticmaalaya Tigidhada dhacdada. Ku lammaan Munaasabada Taariikhda oo ku dara dhacdooyinka jira iyo shaqeynta RSVP. Nidaamkeeda plug-n-play, Tigidhada Dhacdada waxaa loo dhisay horumariyeyaasha; dhisayaasha goobta waxay heli karaan qalab ay ka mid yihiin template-ka qayb ka-hortagga, martigeliyaha template tags, jillaab iyo filtarrada, dukumeenti taxaddar leh, iyo sidoo kale maktabadda kordhinta bilaashka ah.
Dawaarlaha tigidhka adeegsada hab dareen leh, nidaamka tigidhada elektaroonigga ah oo badan kaas oo siinaya awoodda si dhakhso ah oo sahlan loo iibiyo tigidhada. E-tigidhada waxaa si toos ah loogu soo diri doonaa koodka QR iyo ka-qaybgalayaasha. Dawaarlaha tigidhka waa mid si heer sare ah loo habeyn karo wuxuuna bixiyaa awooda lagu habeynayo tigidhada elektaroonigga ah si aad u sheegto wax kasta oo aad rabto.
Marka laga soo tago madal si fudud loo isticmaali karo oo aadka loo habeyn karo, Ticket Tailor waxa kale oo uu leeyahay is dhex galka lagama maarmaanka ah ee ka dhigaya aragtida tigidhka iyo adeegsiga mid sahlan. Tailor Tigidhku wuxuu u isticmaalaa PayPal bixinta kaadhka deynta fudud, MailChimp si uu iimayl ugu diro ka qaybgalayaasha, iyo Facebook diiwaangelinta dhacdada tooska ah.
Iyadoo Tickera, waxaad ka fogaan kartaa faa'iido-wadaaga dhinac saddexaad, taas oo macnaheedu yahay dhexdhexaadin iyo kharash aan loo baahnayn. TickeraMadalku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si fudud u maamusho dhacdooyin kala duwan, qaybinta tigidhada, iyo code-yada qiimo dhimista.
Isticmaalayaasha Tickera waxay heli karaan tigidhyo kala duwan oo ay ku jiraan tigidhada VIP-da, jeeg-gelinta ama taariikhaha iibka tigidhada, ama ikhtiyaarrada fudud sida tirada iyo qiimaha. Si kastaba ha ahaatee, isticmaalayaashu waxay dooran karaan inay ka faa'iidaystaan ​​dhammaan xulashooyinka la heli karo ama waxay dooran karaan inay tigidhkooda ka dhigaan mid fudud oo ikhtiyaar la'aan ah. Dhawaanahan, Tickera waxay soo saartay istaraatijiyad jiiditaan iyo tuuris ah oo lagu abuurayo qorshooyin dabaq oo cajiib ah.
Dhacdada Espresso wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u beddesho blog-gaaga ama mareegahaaga si aad u noqoto mareegaha maareynta dhacdooyinka si buuxda u muuqda. Tani waa laga yaabaa inay tahay baakooyinka boosaska ugu badan ee sifada leh oo awood u leh inay abuurto foomamka diiwaangelinta gaarka ah iyo iimaylada, xadka fadhiga, xulashooyinka qiimaha badan, iyo koodka dhimista tigidhada daabacan. Event Espresso sidoo kale waxay leedahay taageero heer sare ah si ay uga caawiso macaamiisha inay maraan plugin.
Ma haysaa plugin ballan-qaad ah oo aad ugu jeceshahay iibinta tigidhada? Noo sheeg waxa ku saabsan faallooyinka hoose!
4 Plugins Management Project si loo gaaro Ururka ugu dambeeya
Aragtida Dijital ah Bishii: Juun 2017